INGELOSI INOMBOLO 999 INTSINGISELO + YESIMBOLI - INANI
Ingelosi Inombolo 999 Intsingiselo yokomoya + uphawu
INTSINGISELO YOKUGQIBELA 999
Lixesha lokuba ubuye umva kwaye ubone umfanekiso omkhulu wento iNdalo ekugcinele yona! Kukusa kwexesha elitsha kwaye uvala isahluko esikhulu ebomini bakho kwaye unyathela kwinto entsha ngamathuba angenamda! Ingelosi inombolo 999 ithi lixesha lemilingo ebomini bakho apho unamandla okwenza amaphupha akho abe yinyani.
Inkqubo yokuphelisa umjikelo kunye nokwanda ngamanye amaxesha inokuba yinkqubo edidayo kunye neentlungu ngokwasemphefumlweni, njengoko sikhupha into eyayisaziwa, engasasebenziyo kwelona zinga liphezulu. Lo mjikelo mtsha uzisa uchulumanco, uthando, uvuyo, intabalala kunye nenkululeko! Yolula iingalo zakho kwaye ukulungele ukwamkela. Nokuba yeyiphi na enokuphela ebomini bakho, nokuba kungumsebenzi, ukugoba iprojekthi, ukufudukela kwisixeko esitsha, ukunqamla ubudlelwane neqabane, umhlobo okanye ilungu losapho, njl.njl. kulungile nangona ungasiboni kakuhle isizathu sokuba kungoku. Ingelosi inombolo 999 kuthetha ukuba akusoloko kubalulekile ukubuza KUTHENI le nto okanye imeko yenzekile- phefumla- kwaye uqhubeke nokuqhubela phambili. Iingelosi kunye noMhlaba wonke ziyakuxhasa onke amanyathelo endlela. Yazi nje ukuba ngokwenene usendleleni elungileyo yemishini yomphefumlo wakho apha eMhlabeni.
Ukuvala umsantsa phakathi kwe-ego yakho kunye nokuziphakamisa okuphezulu, iingcinga, kunye neemvakalelo zothando, ukuthembela, ukholo, ngakumbi kulungelelwaniso lomendo wakho kobu bomi kunye noMthombo. Ukuthembela kwi-intuition yakho kubalulekile ngeli xesha, njengoko uzamkela kakhulu izikhuthazo ezilungileyo ezivela kwiingelosi, izikhokelo zakho zomoya, kunye nokuziphakamisa kwakho okuphezulu. Ukuba uziva ungathandabuzeki, uloyiko, okanye ukunqongophala kokucaca ebomini bakho- iingelosi kunye noMoya zihlala zilindile ukuba ucele uncedo ukuze zingene kwaye zizise iintsikelelo ebomini bakho.
Njengebhabhathane elishiya ikhephu, ukulungele ukutshintsha usasaze amaphiko akho ukubhabha! Okwangoku, uhambelana ngokugqibeleleyo neNdalo iphela kwaye uqhubeke nokuba kulo mzuzu wangoku ukuze uqhubeke nokuhamba kakuhle kwamandla okuhamba kuwe ngoku.
Iingelosi zakho zifuna ukuba wazi ukuba usikelelwe ngobuninzi ngazo zonke iindlela, kwaye ngokwabelana nabanye ngobuninzi bakho kukuvulela, nangakumbi, ukuba ube kukuhamba noMhlaba.
ukuzilolonga ekhaya ukunciphisa amanqatha esisu
Ingelosi inombolo 888
ingelosi iinombolo 888
Izipho zeNdlovu ezimhlophe wonke umntu uya kuzilwela
umyeni wam akafuni kusondelelana